509 खरीददार अहिले साइटमा छन्
82 हिमाल बेचेको सम्पत्ति
तपाईं खरीदारों देखि प्रस्ताव मोहक को एक विशाल नम्बर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?
कल को एक स्नोबल?
इमेल को पहाड?
Business Asset Exchange ग्यारेन्टी परिणाम प्रस्ताव मा गर्व छ!
3 बलियो तर्क ...
त्यसैले कारोबार व्यापार र सम्पत्ति विनिमय मा छिटो बेचिन्छन् किन?
तपाईंको प्रस्ताव सूचीबद्ध गरे पछि एकै व्यापारमा रुचि राख्ने हाम्रो डेटाबेसमा सबै खरीदारहरूलाई पठाइनेछ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँको प्रस्ताव न केवल वेबसाइट को आगामी आगंतुकहरु द्वारा बल्कि यसको द्वारा पकडे संभावित खरीदारों द्वारा पनि विश्लेषण गरिनेछ।
व्यापार र सम्पत्ति विनिमय गठबन्धनको वेबसाइट संसारभरि 239+ देशहरूमा लोकप्रिय छन्। वेब स्रोतसाधन यातायात निरन्तर बढ्दै छ, र तपाईंको सूचीमा खरीदार प्रायजसो * मा स्थानीय व्यवसायी भन्दा एक उच्च मूल्य जो प्रस्ताव यी देशहरूमा प्रत्येक उपलब्ध हुनेछ।
अन्य लोकप्रिय स्रोत मा सूचीकृत
आफ्नो विज्ञापन व्यवसाय र सम्पत्ति विनिमय मा प्रकाशित गरिएको छ, यो स्वचालित रूपमा राम्रो (जस्तै "हातबाट हात" र Avito रूपमा) अन्य लोकप्रिय स्रोत मा उल्लेख गरिएको छ। यो विज्ञापन अधिक कुशल बनाउँछ र ग्राहकबाट कल को संख्या बढ्छ।
आफ्नो व्यापार वा सम्पत्ति त्वरित र ग्यारेन्टी बिक्री!
बिक्री प्रत्याभूति छ
100.000 संभावित खरीदारों!
स्थानीय र विदेशी आगंतुकों
अन्य लोकप्रिय वेबसाइटहरु आफ्नो विज्ञापन को स्वचालित वितरण
तीन सजिलो कदम बनाउन
साइट मा स्वतन्त्र लागि एक सूचीकरण सिर्जना
हामी चाँडै तपाईं खरीदार पाउँछौं।
तपाईं मात्र एक खरीदार फेला र उहाँलाई कुराकानी गर्न सुरु तिर्न।